Umboniso wevidiyo yenguqulelo entsha yokuqhuba ngokuzimela kukaTesla | Iindaba zeGajethi
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo umvelisi wemoto uTesla wakhupha uhlaziyo kwisoftware yakhe evumela ukuqhuba ngokwakho apho ukuhlangana komsebenzisi kubalulekile kumaxesha amaninzi. Kodwa ukuqhuba ngokwakho yayilinyathelo lokuqala lokuba ube nakho ukubonelela ngokuqhuba ngokuzimeleyo ngokupheleleyo, ukuqhuba apho inkampani ibisebenza khona kwiinyanga ezidlulileyo kwaye ibona ukuba isebenza njani, uTesla uthumele kwiwebhusayithi yayo ividiyo, ngomculo weBenny Hill Show, apho sinokubona ukuba iTesla yenza njani uhambo ngokupheleleyo ngaphandle ungenelelo lomsebenzisi.
Kodwa eyona nto iyibizayo, ngaphandle kokubona indlela isithuthi siqhuba ngokuzimela ngokupheleleyo ngaphandle kongenelelo lomsebenzisi, ziikhamera ezintathu ezisetyenziswa ngulo msebenzi nalapho kufunyanwa imeko-bume ejikeleze isithuthi kwaye apho zonke izinto ezinokuba yingozi ekuqhubeni imoto zichongiwe. Njengoko sibona kumfanekiso ophambili kweli nqaku nakwividiyo eqhotyoshelweyo, esi sithuthi sineekhamera ezintathu: enye ngaphambili kunye nezimbini zangasemva ezalatha emacaleni.
Ezi khamera zinazo Abenzi boluvo abafumana uhlobo lomqobo kwaye bachonge imibala eyahlukeneyo. Imigca yokuhamba kwemibala inombala opinki, omfusa usetyenziselwa imiqondiso yezithuthi, izithuthi kunye nabahambi ngeenyawo kwaye izithuthi ziphawulwe ngesikwere esiblowu ngelixa uluhlaza zizinto ekufuneka ziphephe isithuthi. Ukuba sifuna ukubona ukuba umbala ngamnye uthetha ntoni, ezantsi kwevidiyo sifumana ilivo eliza kusinceda sichonge zonke izinto ezenziwa kukuzimela kukaTesla kuhlobo 2.0 olusendleleni.
Kucacile ukuba lonke ixesha kunjalo kufutshane nokuba kunokwenzeka ukuba singene emotweni ngokungathi yiteksi kwaye masimxelele apho sifuna ukuya khona, ngaphandle kokunxibelelana naye nangaliphi na ixesha, kuba njengoko sibona kwintengiso, unakho nokuzipaka ngokwakhe, nangona lo msebenzi ubukho ixesha elide.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Umboniso wevidiyo yenguqulelo entsha yokuqhuba ngokuzimela kukaTesla
Amaqabane eAmazon neFiat ukuthengisa izithuthi